Mabhuku Akanakisa Nezve India | Zvazvino Zvinyorwa
Alberto Makumbo | | Mabhuku, Novela, dzakawanda
India ndiyo nyika isinganzwisisike, ine hwema hutsva nemavara, mairi isu tese taida kurasika kana, zvirinani, kuti tigone kucherechedza kubva kune imwe kaleidoscope. Sarudzo inova inogoneka zvakanyanya kana zvasvika pakufamba kuburikidza neizvi akanakisa mabhuku nezve India inoongorora kumeso kwakasiyana kweicho chiri chimwe chemarudzi akasarudzika pasirese.
1 Mabhuku akanakisa nezve India
1.2 Swami Neshamwari Dzake naRK Narayan
1.3 India: Mushure mamirioni emamiriyoni, naVS Naipaul
1.5 Chiyero Chakakwana, naRohinton Mistry
1.6 Mwari Wezvinhu zvidiki, naArundhati Roy
1.7 Wagon Yevakadzi, naAnita Nair
1.8 Zita Rakanaka, naJhumpa Lahiri
1.9 White Tiger, naAravind Adiga
Ramayana ari kuIndia izvo Odyssey iri kuWestern zvinyorwa: zvinyorwa zvinyorwa pane hwakawanda hwetsika hwakavakirwa uye nenzira yayo yekunzwisisa rondedzero. Rakadhindwa imwe nguva muzana ramakore rechitatu BC nanyanduri Vālmīki, Ramayana (kana Rama Rwendo) iri epic iyo inotaurira nyaya yaPrince Rama uye kushanya kwake kuchitsuwa cheLanka kuponesa mudiwa wake Sita kubva mukubata kweRavana. Pembedzo yakakwana yekupa iyo dzidziso dzechiSanskrit tsika izvo zvaizogara mukufamba kwenguva uye nehunyanzvi kwete chete yeIndia, asi yenyika dzeSoutheast Asia dzakakunda muzana ramakore rechisere.
Swami Neshamwari Dzake naRK Narayan
MuIndia, kuva "swami" zvinoreva kuzvidzivirira, kazhinji seyogi iri kusvika pakuzvara. Swami neshamwari dzake, yekutanga yaGraham Greene anotsigirwa munyori weNarayan's "Malgudi" nyaya, yakava kwete imwe chete indian wekutanga anoshanda muchirungu iyo yakapfuura kupfuura miganhu, asi zvakare mumufananidzo wemakore gumi ema30 muIndia yakaratidzirwa nesangano rekuzvimirira iro rave kusvika mazuva ayo ekupedzisira. Zvakadaro, nyanzvi zhinji dzinoedza kutsvaga nzvimbo yeMalgudi, iro guta rekunyepedzera muSouth India.
Kunyangwe iri munzvimbo yeCaribbean, zviwi zve Trinidad uye Tobago vanoumba imwe yenyika dzine huwandu hukuru hwevaIndia pasi rose. Mhedzisiro ye diaspora iyo Naipaul, wekuHindu kwakabva, ainyatsoziva nezvayo kusvika panguva yaakafunga kudzoka kuIndia ku dzokororazve kuziva kwako. Mumapeji ese ebhuku rino, Naipaul anotsanangura nyika yemadzitateguru ake nekuseka uye neunyoro, nekunyepedzera kwemumwe munhu ari kufamba nechikepe munzvimbo yakasiyana zvachose nezvakaonekwa kare. Pasina kupokana, rimwe remabhuku akanakisa paIndia.
Ungada here kuverenga India, naVS Naipaul?
Inofungidzirwa imwe yeakanakisa mienzaniso yeiyo mashiripiti echokwadi "Yakagadzirwa muIndia", Vana vepakati pehusiku ndiro raive basa rakasimbisa aisazivikanwa panguva iyoyo Salman Rushdie achinongedzera kune imwe ye zvikamu zvakakosha kwazvo munhoroondo yeIndia: pakati pehusiku musi waAugust 15, 1947, panguva iyo nyika yeAsia yakawana kuzvitonga. Chiitiko umo kuberekwa kwaSareem Sinai kunoitika, protagonist ane masimba emweya akachinja basa iri rakaburitswa muna 1981 kuita anokunda iwo Booker Prize kana iyo James Tait Nhema Chirangaridzo Mubayiro.
Chiyero Chakakwana, naRohinton Mistry
Akazvarwa muBombay mumhuri yeParsi, Mistry akatamira nemukadzi wake kuCanada mu1975 kwaakatanga kutsikisa nhevedzano yenyaya dzaizobatana nekuburitswa kwe Chiyero chakakwana muna 1995. Novel yakaoma seyayo nyoro, yakaiswa muguta reIndia panguva yekuzivisa kwenzvimbo yechimbichimbi, chikonzero chinotungamira mavara mana asingazivikanwe nemumwe kuti vagare vese mufurati diki. Iyo novel yaive akasarudzwa kumubairo webhuki, akahwina mubairo weTrillium uye akaverengerwa mu Oprah's Book Club muna 2001, izvo zvakakonzera mazana emakopi akatengeswa.
Akazvarwa mumhuri yeSyria-yechiKristu inogara munzvimbo dzinopisa Kerala, nyika yeSouth IndiaArundhati Roy akatora rinenge hupenyu hwese kuti anyore iyi nhoroondo yehupenyu hwevanhu vane tsananguro dzinoita iro rakasarudzika, rakakosha basa. Iyo nyaya, yakagadzwa muna 1992 na1963, inotaurira hudiki uye musangano wakazotevera waRahel naEstha, mapatya maviri akabatanidzwa nechakavanzika chinotyisa. Mushure mekuburitswa muna 1997, Mwari wezvinhu zvidiki vakava mutengesi uye anokunda mubairo weBooker.
Wagon Yevakadzi, naAnita Nair
Mamiriro evakadzi muIndia Yakave nekuchinja kwakawanda, zvakadaro ichiri nekuchengetedza zvakasara zvakashata. Chirevo chinotariswa naNair mukati memapeji ese ebhuku rino ane protagonist, Akhila, mukadzi wezera repakati nepakati uyo anosarudza kuita rwendo rwechitima uko kwaanosangana nevamwe vashanu vechikadzi vafambi vanova kurudziro. Vakadzi vane irascible, vanozviisa pasi uye vane huremo varume vanoita microcosm izere nekudziya uye kuratidzira.
Usapotsa Wagon Yevakadzi, naAnita Nair.
Zita Rakanaka, naJhumpa Lahiri
Ipfupi nyaya yemunyori pamberi pemunyori anotonga nekubudirira uye mhando yemabasa akadai Nyika isina kujairika, Bengali-American munyori Jhumpa Lahiri akashamisa nyika nekuburitswa kwa2003 kwe bhuku rake rekutanga, Zita rakanaka. Iyo nyaya yakaoma iyo inotevera mumakwara emuchato weIndia wekureruka unogara muCambridge. Mushure mekusununguka mwana wake wekutanga, kusarudzwa kwezita kunova muenzaniso wakanaka pakati petsika (ambuya vanofanira kuisarudza) uye chazvino kwavanofanira kuchinjira. Iyo novel yakashandurwa muna 2006 kuenda ku cinema.
White Tiger, naAravind Adiga
Nebhiza pakati picaresque inoverengeka uye epistolary,White Tiger Inorondedzerwa kuburikidza nemaemail akasiyana ayo murume anotumira kune Mutungamiriri weChina. Uyu murume anonzi Balram Halwai, uye aive mukomana akaunzwa kubva kune imwe yenzvimbo dzine hurombo muIndia kuzoshanda semuranda mudiri wemhuri yakapfuma yeNew Delhi. Kubva ipapo, protagonist yedu inokwanisa kuve muzvinabhizimusi ane ropa kubva kuguta reBangalore. Iri bhuku, rakanyorwa naAdiga rakashanduka rikava wechipiri munyori mudiki kuhwina iyo Booker Prize, yakave yakanyanya kutengesa pakutengeswa kwayo muna 2008.
Ndeapi akanakisa mabhuku kuIndia awakaverenga?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Mabhuku akanakisa nezve India
Violet Anderson akadaro
Rino bata rinobata pamusoro peIndia ASHES ON THE GODAVARI RIVER (Amazon) .Iine ruzivo, nzvimbo dzekunze, kutadza, zvakavanzika, kufamba, uye kudanana, uye zvakanyorwa zvakanaka pamisoro senge sati, michato yakarongedzwa, uye marginalization echirikadzi.
Pindura Violeta Anderson
Rosalyn perez akadaro
Uye rimwe bhuku rakanaka rinotsanangura tsika dzechiHindu nekujeka uye runako inonzi Las Torres del Silencio, (Amazon)
Pindura Rosalyn Perez
Rosa Perez akadaro
Iyo Towers yekunyarara ndeimwe inonakidza uye yakanyorwa zvinyorwa pamusoro peIndia netsika dzayo dzinoshamisa, inowanikwa paAmazon.
Pindura kuna Rosa Perez
Chokwadi Madota muRwizi rwaGodavari uye Iyo Towers yekunyarara ndiwo makuru enganonyorwa akaiswa muIndia, nemunyori mumwe chete (Lourdes María Monert) asi anogona kuverengerwa zvakasiyana nekuti haasi saga asi akazvimiririra kubva kune mumwe nemumwe.
Isabel Garcia Moreno akadaro
Ndichangobva kuverenga bhuku rinodaidzwa kuti Adventure muIndia uye ndaona kuti iri nemunyori anonzi Carmen Pérez Calera uye anosaina nepseudonym "siestecita." Ndakaifarira zvakanyanya, inonakidza kuvaraidza uye ndakazoona iri runyorwa rwekunakidza. Ikozvino mahara paAmazon.
Pindura kuna Isabel García Moreno
Pindura kune qxsfparewn
Ini ndinotenda kuti kushaikwa kubva pane rondedzero nderimwe remabhuku anoshamisa uye makuru ati ambonyorwa nezveIndia, "A Good Match" naVikram Seth, anotariswa nevatsoropodzi vane hunyanzvi semutauri akanakisa weIndia yechokwadi.